भियतनाममा कोरोनाबाट किन कसैको मृ*त्यु भएको छैन ?:: Mero Desh
भियतनाममा कोरोनाबाट किन कसैको मृ*त्यु भएको छैन ?
Published on: १३ बैशाख २०७७, शनिबार १२:४८
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारी अहिले विश्वभर फैलिएको छ । यस्तोमा धेरै मुलुकहरू प्रभावित बनेका छन् । विश्वमा यस्तो पनि मुलुक छ, जहाँ कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या तीन सयको हाराहारीमा पुगे पनि अहिलेसम्म कसैको पनि मृत्यु भने
भएको छैन । त्यो देशको नाम हो– भियतनाम ।भियतनाममा अहिलेसम्म दुई सय ७० जना मानिसमा कोरोना भाइरसका संक्रमित भेटिसकेका छन् । सुरुवातमा यो मुलुकमा कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न युद्धस्तरको तयारी गरिएको थियो । तर, अहिले भने यो मुलुकमा बिस्तारै प्रतिबन्ध हटाउने तयारी भइरहेको छ । यस्तोमा भियतनामले अर्को मुलुकलाई के शिक्षा दियो ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
सीमा बन्द गर्ने निर्णय
जनवरीको अन्तिम दिन भियतनाममा कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमण देखिएको थियो । त्यसपछि सरकारले निकै छिटो यसबाट पार पाउन चीनसँगको सबै सीमा पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । साथै सबै प्रमुख विमानस्थलमा अर्को मुलुकबाट आउने प्रत्येक मानिसमा थर्मल स्क्रिनिङको व्यवस्था पनि गर्‍यो ।
सरकारले कोरोना भाइरस विदेशबाट आएका मानिसमा देखिएसँगै सबै विदेशबाट आउने मानिसलाई १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने आदेश दियो । क्वारेन्टाइनमा राख्न सरकारले होटलहरुलाई पैसा दिएर बुक गर्‍यो । मार्चको अन्तिम सातामा भियतनामको सबै विदेशी प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइयो । भियतनामी मूलका विदेशी र भियतनामी नागरिकका लागि पनि प्रतिबन्ध लगाइयो ।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जोड
कोरोना भाइरसबाट संक्रमित मानिसलाई आइसोलेसनमा राखिसकेपछि उनीहरूको सम्पर्कमा आएका मानिसहरु पत्ता लगाउने काम तीव्र गतिमा अघि बढाइयो । साथै उनीहरूको पनि परीक्षण गरियो ।यतिमात्र होइन, भियतनाम आफ्नै मुलुकमा सस्तोमा निर्माण गरिएको टेस्टिङ किट्स निर्माणमा सफल रह्यो । भियतनामसँग ठूलो परिमाणमा मानिसहरूको परीक्षणको लागि जर्मनी र दक्षिण कोरियाको जस्तो स्रोत र साधन पनि छैन । त्यसका लागि उसले कम खर्च गर्ने तरिका अपनायो र संक्रमणका मामिलालाई आक्रामकरुपमा ट्र्याक गर्न थाल्यो । साथै संक्रमित मानिसलाई आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गरियो ।
समाजमा सचेतना फैलाउनु
भियतनाम सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्ध मानिसहरुलाई जागरुक गराउन देशव्यापी अभियान चलायो । यो अभियानमा छोटो भिडियो र फोटोहरुको माध्यमबाट मानिसहरुलाई कोरोना भाइरसबाट बच्ने तरिका सिकाइएको थियो । ऐतिहासिक भियतनाम–अमेरिका युद्धको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ग्युएन जुआन फुकले मानिसहरूलाई लामो समयको महामारीका लागि पनि तयार रहन आग्रह गरे ।न्यु साउथ वेल्स युनिभर्सिटी, क्यानबेराका प्राध्यापक कार्ल थयारका अनुसार अहिले भियतनामको समाज सचेत भएको, एक पार्टीको मात्र व्यवस्था भएको र प्रहरी, सेनालगायतको संगठन चुस्त भएकाले महामारीविरुद्ध लड्न सहज भएको बताउँछन् । भियतनाममा सबै मानिसहरुलाई छिमेकीमाथि पनि निगरानी बढाउन आग्रह गरिएको थियो ।भियतनामले उठाएको कदमको हिसाबमा हेर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रमा भने नकारात्मक असर परेको छ । अहिले सबै कारोबार बन्द भएका छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेको भियतनाम एयरलाइन्सको अमेरिका, युरोपेली युनियन र पूर्वी एसियाको उडान रोकिएको छ । जसको कारण कराडौं डलरको नोक्सानी सामना गर्नुपर्ने आशंकाहरू गरिँदै आएको छ ।
भियतनाम कोरोना संक्रमित मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सफल भएको छ । तर, उसले केही क्षेत्रमा भने नागरिकको स्वतन्त्रतामा रोक लगायो । प्रभावकारी स्थानीय प्रशासन र चुस्त सुरक्षा प्रवन्धको कारण भियतनाम केही जिल्लालाई पूरै क्वारेन्टाइनमा राख्न सफल भयो ।तर, युरोपेली मुलुकमा जस्तो लकडाउन भने उसले लगाएन । उसले राजधानी सहर हानोई र अन्य एक दर्जनभन्दा बढी सहरमा यसअघि लगाइएको प्रावधानहरू पनि हटाइसकेको छ ।यद्यपि, अहिले पनि भियतनामका तीन जिल्लामा प्रतिबन्ध कायम छ । यहाँ साढे चार लाख मानिसहरू छन् । यो क्षेत्रको सुरक्षा स्थानीय सेनाले गरिरहेको छ । यहाँबाट कसैलाई पनि बाहिर निस्किन दिइएको छैन ।ग्युएन भन्छन्, ‘कोरोना भाइरसको नराम्रो प्रभावबाट देशलाई बचाउन राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथै संगठित शासन व्यवस्था र आज्ञाकारी जनता हुनु पर्याप्त हुन्छ ।’